Yoweri Museveni “Mushkilada Soomaaliya waa mid toos u taabanaysa gobolka &…" – SBC
Yoweri Museveni “Mushkilada Soomaaliya waa mid toos u taabanaysa gobolka &…"
Madaxweynaha wadanka Ugandha Yoweri Museveni ayaa ku tilmaamay mushiladaha dagaal ee xiligan ka aloosan dalka Soomaaliya inaanay mid ku kooban Soomaaliya ay toos u taabanayso wadamada gobolka & guud ahaan caalamka, waxaana uu ku baaqay in si deg deg ah loo soo afjaro dhibaatadaasi.
Khudbad uu jeediyey oo ku soo beegay sanad guuradii 1-aad ee ka soo wareegtey weerarkii qarax ee ka dhacay magaalada Kampala maanta oo kale sanadkii 2010-kii oo ay ku dhinteen 76 qof oo ciyaaro kubada cagta daawanayey ayuu wuxuu ku sheegay hadalkiisa in Soomaaliya ay haatan qatar ku tahay sida hadalka uu u dhigay dhaqaalaha wadamada Geeska Afrika & aduunka.
Weerarkaasi oo ay sidoo kale ku dhaawacmeen boqolaal qof waxaa masuuliyadiisa sheegtey xoogaga Al-Shabaab ee dagaalka kula jira dawlada KMG & ciidamada AMISOM ee ka socda Ugandha & Burundi ee taageeraya.
“Sida aynu wada xusuusanahay, muwaadiniinteenu waxay ku nafwaayeen gacmaha qaraxyadii argagixiso ee ka dhacay Kamnala 11-kii July, 2011, waxaan u dirayaa tacsideyda dadkii ay ka geeriyoodeen, waxaan doonayaa inay ogaadaan qoysaskooda inaynay ilaawi doonin maalintan naxdina leh, waligeen waynu u baroor diiqi doonaa dhalinyaradii & qalbiyadii ay sida macno la’aanta ah u burburiyeen argagixisadu” ayuu hadalkiisa ku yiri Madaxweyne Museveni.
Guud ahaan dalka Ugandha maanta July 11 waxaa looga baroordiiqayaa qaraxyadii mataanaha ahaa ee Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Kampala waxaana saxaafada dalkaasi ay si weyn u hadal haysaa raadka ay reebeen qaraxyadaasi iyadoo qaar ka mid ah jaraa’idka wadankaasi ay sheegeen in sanad ka dib qaraxaasi aanu amaan aheyn wadanka Ugandha, iyagoo xusey in baabuurta sida tagaasida & kuwa yar yar la baarayo, dadkuna aanay ku qabin amaan inay yimaadan goobaha lagu badan yahay.
Docda kale Madaxweynaha Ugandha wuxuu baaq u diray Soomaalida waxaana uu yiri “Sidoo kale waxaan ugu baaqayaa walaalaha Soomaaliyeed gabdho & wiilal, inay na caawiyaan, sida aynu iyaguna u caawinayno, kama lahin Soomaaliy dan kale oo aan ka aheyn fikradaha Pan-Africanism-ka (Afrikaanimo), waxaynu doonaynaa in Afrika ay ka ahaato xor dhamaan faragalinta shisheeye, oo ay ka mid yihiin amxaqiinta loogu yeero xagjiriinta, kuwii ku dhintey halkan (Kampala), halkaasi oo ah meel aan aheyn furin dagaal, waxay u waayeen naftooda qaaliga ah ku dheganaanshaha wadankeena ee Afrikaanimada, waana u tacsiyeynayaa mid kasta oo ka mid ah iyaga”.
Yuweri Musevni wuxuu sheegay in dhibaatada Soomaaliya ay xiligan noqonayso dhibaato rasmi ah oo taabanaysa bariga Afrika oo dhan & waliba aduunka.
““Somaliya hada waa dhoofiyaha aragagixisada dhamaan dhulalka, burcad badeedu waxay ka dhigeen hawlihii maraakiibta ee gobolka mid qaali ah, tan iyo markii maraakiibtu bilaabeen inay leexasho xoogan sameeyaan iyagoo taasi u yeelanaya inay ka fogaadaan weerarada shufto badeeda, Soomaaliya hada waxay ku tahay qatar dhaqaaalaha Bariga Afrika” ayuu hadalkiisa ku sii darey Museveni.
Geestiisa ayaa Mareykanku wuxuu ku biiray Ugandha u qashuucida dadkii naftoodda ku waayey weeraradaasi, waxaana uu sheegay in uu diyaar u yahay in ka caawiyo dawlada Ugandha sidii cadaalada loo horkeeni lahaa kuwii ka masuulka ahaa dhacdadan, ayna cadaalad u dareemi lahaayeen dadkii wax ku dhintey falkan dambi.
Danjiraha Mareykanka ee Uganda, Jerry P. Lanier wuxuu yiri “Shacabka Ameerikaanku waxay u diyarayaan tacdsidooda dadka Ugandha & dhamaan ummadda ay taabteen weeraradii argagixiso ee Kampala oo sanad laga joogo, waxaynu u diraynaa tacsi waana u ducaynaynaa una tukunaynaa, kuwii la jeclaa kuwaasi oo ahaa kuwii la dilay ama la dhaawacay, maanta waxaynu wada xusuusanahay xooga iskaashi ee aynu wada leenahay aynuna ka wadashaqeynayno si wadajir ah sidii aynu u difaaci lahayen dadkeena gumaadka argagixisada & kuwa doonaya inay waxyeeleeyaan”.
Weeraradaasi ka dhacay magaalada Kampala bishii July ee sanadkii hore waxaa masuuliyadooda sheegtey xoogaga Shabaabka oo sheegay inay u aargudayeen dadkuu ku dhintey xiligaasi duqeymo ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay ciidamada AMISOM ku garaaceen suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho sida uu sheegay xiligaasi afhayeenka dhaqdhaqaaqaasi Sheekh Cali Dheere.